Lixabiso isinyithi sheet sokunyathela iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Amalungu e-Sheet esinyithi abandakanya ukunyathela izitampu. Amalungu ephepha lesinyithi ziimveliso ezenziwa ngetekhnoloji yesinyithi. Asinakwenza ngaphandle kwamaphepha esinyithi naphina ebomini bethu. Amalungu e-Sheet esinyithi asetyenziswa ngokubhijela amandla okusika, ukusika i-laser, ukuqhubekeka okunzima, ukubopha isinyithi, kunye nokuzoba kwesinyithi. Iveliswa ngokuzoba, ukusika iplasma, ukuwelda ngokuchanekileyo, ukwenza umqulu, ukugoba isinyithi, ukusweleka, ukusika i-jet yamanzi, kunye nokuwelda ngokuchanekileyo.
Isinyithi esinyithiweyo sokunyathela iindawo-ezichanekileyo zeshiti yentsimbi yokunyathela iindawo zomatshini
Inkcazo kwijenali yelizwe langaphandle ingachaza isinyithi njenge: iphepha lesinyithi yinkqubo ebandayo yokusebenza kwamaphepha esinyithi (ihlala ingezantsi kwe-6mm), kubandakanya ukucheba, ukubetha / ukusika / ukudibanisa, ukusonga, ukuwelda, ukurhabaxa, kunye nokusongela, ukwenza Njengomzimba wemoto), njl.Uphawu lwayo olubonakalayo kukulingana kwelo candelo linye. Iimveliso zeshidi zephepha zinempawu zobunzima bokukhanya, amandla aphezulu, ukuqhuba kombane, iindleko eziphantsi kunye nokusebenza kakuhle kwemveliso. Banoluhlu olubanzi lokusetyenziswa. Ukulungiswa kwesinyithi esisetyenzisiweyo kuye kwasetyenziswa ngokubanzi kwicandelo le-elektroniki, unxibelelwano, ishishini leemoto, kunye nezixhobo zonyango. Umzekelo, kwiimeko zekhompyuter, iifowuni eziphathwayo, kunye neMP3, isinyithi siyinxalenye ebaluleke kakhulu. Ukongeza, isetyenziswa ekwenziweni kwezixhobo zonyango, kwaye ikwasetyenziswa kwimoto nakwilori (kwilori) kwimizimba, iinqwelomoya kunye namaphiko, iitafile zonyango, uphahla lokwakha (ulwakhiwo) nezinye izinto ezininzi.
Izinto eziluncedo ze Shanghai Ouzhan sheet metal bexhentsa iindawo esizisebenzelayo
Elungiselelweyo iphepha lobhedu bexhentsa bexhentsa iindawo oomatshini
Inkqubo ephambili Ukulungiswa kwesinyithi esisinyithiweyo
Egqithileyo Sheet iinxalenye zentsimbi bexhentsa
Okulandelayo: Sheet iindawo metal welding